Fanavaozana ny Metamask: Ampifamadiho ny Binance Smart Chain mivantana avy amin'ny kitapom-bolan'ny Metamask - Cazoo
Fanavaozana ny Metamask: Ampifamadiho ny Binance Smart Chain mivantana avy amin'ny kitapom-bolan'ny Metamask
Home » Home » Fanavaozana ny Metamask: Ampifamadiho ny Binance Smart Chain mivantana avy amin'ny kitapom-bolan'ny Metamask
tenifototra: Binance SmartChain, Metamask, pancakeswap, Binance Smart Chain Network, fifanakalozana famantarana
Fotoana famakiana: <1 minitra
Ny fanavaozana farany an'i Metamask dia mahatonga ny fiainana ho mora kokoa ho an'ireo izay tia ny Binance Smart Chain: azo atao izao ny mifanakalo mari-pamantarana mivantana avy amin'ny birao na poketra finday. Ny endri-javatra Swap dia manambatra ny angona avy amin'ny mpampitambatra fifanakalozam-bola itsinjaram-pahefana, mpanamboatra tsena ary DEX hahazoana antoka fa hahazo ny vidiny tsara indrindra ianao amin'ny sarany tambajotra ambany indrindra.
Metamask, kitapom-batsy tsara indrindra ho an'ny DeFi
Ny lakile Swap, miorina eo ambanin'ny fifandanjan'ny kitapom-bolantsika, dia miantoka ny fahazoanao miditra amin'ny safidin'ny famantarana marobe indrindra sy ny vidiny mifaninana indrindra, manome ny vidiny avy amin'ireo mpanangona maro sy mpanamboatra tsena tsirairay amin'ny toerana iray. Ny saram-panompoana 0,875% dia natsangana ho azy isaky ny teny nindramina, izay manohana ny fampandrosoana mitohy hahatonga ny MetaMask ho tsara kokoa.
Fivarotana lehibe ao anatin'ny Metamask, izay mifandray amin'ny Smart Chain
Metamask tena izy ny Wallet tsara indrindra ho an'ny DeFi. Raha mba nanam-potoana hamitana an'io lahatsoratra io aho .. ..
Mila mifamadika avy amin'ny Binance Smart Chain mankany Binance miaraka amin'ny Metamask ianao. Azonao atao ny mampiasa ny Binance Bridge. Hitanao io voalaza eto koa.
Lahatsoratra talohaInona ny rojo Smart Binance, ary ahoana no ifandraisany amin'i Metamask
Inona ny rojo Smart Binance, ary ahoana no ifandraisany amin'i Metamask
Metamask: torolàlana tsikelikely mankany amin'ny kitapom-bola tsara indrindra ho an'ny DeFi
Ny vola madinika momba ny fiainana manokana 10 tsara indrindra sy ny fomba hividianana azy